‘माछी बस्ने पानीमा’
काठमाडौं । मिडिया टप नेपालको प्रस्तुतिमा गायक गोपाल तिवारीको ‘माछी बस्ने’ बोलको दोहोरी गीतको म्युजिक भिडियोे सार्वजनिक गरिएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय संगीतकर्मी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार
नयाँ वर्षको पहिलोदिन
काठमाडौं । गायिका तथ राष्ट्रिय सभाकी सांसद कोमल वलीले आफूले सन् २०१९ भित्रै स्वयम्बर गर्ने बताएकी छिन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा गुरु मञ्जरी गु्रपद्वारा सञ्चालित ‘माइस्वयम्बर डटकम’को उद्घाट्न गर्दै वलीले यस्तो बताएकी
झमकको जीवनीमा आधारित
काठमाडौं । मदन पुरस्कार बिजेता साहित्यकार झमक घिमिरेको जीवनीमा आधारित ‘जीवन काँडा कि फूल’ नामक आत्मकथात्मक कृतिमा बनेको चलचित्र चैत २२ देखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । विहीबार राजधानीमा एक कार्यक्रमकावीच चलचित्रको प्रदर्शन
नारायण गोपाल २८
काठमाडौं/शनिबार स्वर सम्राट नारायण गोपाल गुरुवार्चायको २८ औं स्मृति दिवसको अवसरमा संगीत शिला प्रतिष्ठानले कला तथा सांगीतिक क्षेत्रका ब्यक्तिलाई सम्मान गरेको छ । कलाकर्मीहरुलाई नेपालीका युवा नेता गगन कुमार थापाले सम्मान गरे
बाख्रा चराउन जाँदा...
नारायण नेपाल, फ्याट्–फ्याट् पड्किने चप्पल लाएर उफ्रँदै मनकान्छी टाट्नातिर लाग्छे । उसलाई बाख्रा चराउन जान रमाइलो लाग्छ । यसपाली तिहारमा द्यौसी–भैलो खेलेर कमाएको पैसाले उसले त्यो जूनछाप भुक्के चप्पल किनेकी हो । साथी–सङ्गीलाई
काठमाडौँ । सिन्धुपाल्चोकमा जन्मिएर कलाकारिता क्षेत्रमा सक्रिय कलाकर्मीले सिन्धुपाल्चोक कलाकार समाज गठन गरेका छन् । समाजको काठमाण्डौंमा सम्पन्न भेलाले मोडल तथा भिडियो निर्देशक भुवन श्रेष्ठ ‘मुस्कान’को अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय
काठमाडौं । गायिका दुर्गा साउदको गीति एल्वम् ‘कालीकाली’ शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको छ । शुक्रबार रिपोेर्टर्स क्लबमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच पूर्व कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नेकपाका नेता शेरबहादुर तामाङ र सांसदसमेत
भोजराजका एकसाथ दुई
काठमाडौं । पूर्व मुख्य सचिव तथा क्यानडाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. भोजराज घिमिरे एकै साथ दुई गजल कृति लिएर आएका छन् । बिहीबार दुबै कृतिको वरिष्ठ गीतकार रत्नशमशेर थापाले विमोचन गरे । पछिल्लो समय नेपाली गजलमा व्यापक प्रयोग भइरहेको
खतिवडाको ‘डल्ली रेशम’
काठमाडौँ । जापानमा बस्ने नेपाली मोहन प्रसाद खतिवडाको पहिलो दोहोरी गीत ‘डल्ली रेशम’ बजारमा आएको छ । शब्द रचना आफैँ गरेका खतिवडाले म्युजिक भीडियोमा पनि आफैँ मोडलिङ गरेका छन् । डल्ली रेशममा गायिका राधिका हमाल र गायक सुन्दरमणिले
भुइँ मान्छेको आक्रोश
ओई ! माचिण्डे सरकार ? सक्छस भने– ठोक गोली मेरो छातीमा । बजार कटबासको लाठी मेरो टाउकोमाथि बलजफ्ती थुन्न खोज मेरा ओठहरूलाई तर ओकलेरै छाड्छु मनको भडाँस्। ओई माचिण्डे ! कतिन्जेल गर्छस्-सौदा हाम्रो
कविता : छोरी सम्झेर
मेरी छोरी आज मेरी छोरी ओच्छ्यानको एक कुनामा लम्पसार बनेर सुतिरहेकी छिन । न बाबासँग बोल्छे, न भाइसँग माया गरेर हरेक भाग आधा–आधा बनाएर खुवाउने दादालाई त आँखा तर्न थालेकी छिन । यो एक्कासी आएको परिवर्तनले
कविता : न्याय
कानुनी राजमा न्याय हराएको समाचार प्रत्येक दिन हेडलाइन बनेर आइरहन्छ प्र भातको सुनौलो किरणसँगै काला अक्षरहरूमा अखबार बनेर दैलोमा । खुसी दुर–दुर भासीएको छ । गरिब निमुखाका चिसा मझेरीहरूमा सन्नाटाको चाङ बढ्दो छ । शिक्षा
गजल:यो मेरो मुटु उसैको
जीवन कमल यो मेरो मुटु उसैको अनि मेरो मन उसैको उसकै नाममा चलिरहने यो धड्कन उसैको । मुर्ति मात्रै बनाउछु मन्दिर जान पाउदिन म त्यो मन्दिर उसैको हो, त्यो भगवान उसैको । बुढेसकालमा समयलाई किन गुनासो गर्छन् सम्झिंदा,
छक्का पञ्जा ३ को पहिलो
काठमाडौं । निर्माता तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलाको फिल्म ‘छक्का पञ्जा ३’ को गीत यू ट्युबमा हिट लिष्टमा परेको छ । दशैंमा प्रदर्शनमा आउन लागेको ‘छक्का पञ्जा ३’ को पहिलो गीत ‘पहिलो नम्बरमा’ धेरैले रुचाएका छन् । यू ट्युबमा
कविता : आक्रोशित एउटा
रोशन यक्सो ओई ! माचिण्डे सरकार ? सक्छस भने– ठोक गोली मेरो छातीमा । बजार कटबासको लाठी मेरो टाउकोमाथि बलजफ्ती थुन्न खोज मेरा ओठहरूलाई तर ओकलेरै छाड्छु मनको भडाँस्। ओई माचिण्डे ! कतिन्जेल गर्छस्-सौदा हाम्रो
सवारी साहित्यः जोसमा
कलम रोए अक्षर बन्छ कवि रोए कविता । धनी मरे श्रद्धानजली गरिव मरे रमिता । म मरेपछि मेरो लाशको पोस्टमार्टम गर्न नदिनु है प्रिय मुटुमा तिम्रो नाम भेटिदा अनुसन्धानमा फसौली मलाई त बचाउन सकेनौ सकेनौ कमसेकम डुब्न
‘रामकहानी’ को सिग्नेचर
काठमाडौं । दर्शकको ध्यान खिच्न फिल्म मेकरले अनेक आइडिया रच्ने गर्छन् । भदौ २२ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको ‘रामकहानी’ पनि यतिबेला त्यस्तो प्रचार–प्रसारको अभियानमा जुटेको छ । प्रेम र कमेडी मिक्स फिल्मको स्टोरी रोमाञ्जक रहेको
मैले त मन्त्र पढे तिम्रै
काठमाडौं/नेपाली महिलाको महान पर्व तीजलाई लक्षित गरेर धमाधम ‘तीज गीत’ बजारमा आइरहेका छन् । तीजको अवसर पारेर हरि सुवेदीले ‘मैले त मन्त्र पढे तिम्रै नामको....’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । एञ्जिला रेग्मीको स्वर, पारु सुवेदीको
कविता : ऐनामा अनुहार
हरेक पटक एउटा मान्छे ऐना पुछेर सफा गरिरहेको देख्छु । उसलाई अलिकति फोहोर मन पर्दैन, दिनमा चौबिस सय पटक ऐना पुछिरहने ऊ ऐनालाई औधी माया गर्छ । त्यसैले हरेक पटक उसका हात ऐनामा घुमिरहन्छन । कहिल्यै ध्यान दिएन
रमिला र खुमनको तीज गीत
काठमाडौँ । तीजका गीत गाएर सधैं चर्चामा आउने गायिका रमिला न्यौपानेले हिन्दु नारीको पर्व तीजलाई लक्षित गरी ‘भुरुरु उडेको पुतली’ बोलको गीत बजारमा ल्याएकी छन् । चर्चित गायक खुमन अधिकारीले रमिलालाई साथ दिएका छन्। गीतमा अधिकारीको
भिखारीको ‘समुद्र साउती’
काठमाडौँ । कवि बद्री भिखारीको कवितासङ्ग्रह ‘समुद्र साउती’को भानु जयन्तीको अवसर पारेर विमोचन गरिएको छ । संङ्ग्रहको वरिष्ठ कवि तुलसी दिवस, श्यामल, स्वप्नील स्मृति, महेश पौडेल, जसराज किराँतीले संयुक्त रूपमा लोकार्पण गरेका हुन्
काठमाडौं । पत्रकार तथा लेखक दामोदर न्यौपानेको पाँचौ पुस्तक 'स्कुल बेच्ने बालक' साउन पहिलो सातादेखि बजारमा आउने भएको छ । पुस्तक शिखा बुक्सले बजारमा ल्याएको हो । यो पुस्तकमा प्रारम्भिक बाल्यकालका बालबालिकाको मनोविज्ञानलाई
पाँडे र पौडेल ‘माइला’को
काठमाडौँ । साहित्यकार द्वय रामकुमार पाँडे र प्रकाश पौडेल ‘माइला’को संयुक्त हाइकुसङ्ग्रह ‘हजार हाइकु’को काठमाडौँको सि.डब्लु. रेष्टरेन्टमा एक कार्यक्रमबिच विमोचन गरिएको छ । बरिष्ठ गीतकार रत्नशमशेर थापाको प्रमुख आतिथ्यमा
कौशिला रिसालको कथासङ्ग्रह
अमरवाणी संवाददाता/काठमाडौँ । कौशिला रिसालद्वारा लिखित कथासङ्ग्रह ‘आहा फूल ...’ किशोर कथाको राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबिच शनिबार लोकापर्ण गरिएको छ । पूर्वीय वाङ्मयका अध्येता तथा साहित्यकार तिलकप्रसाल लुइटेल, वरिष्ठ कथाकार
कार्कीको ‘मष्टो संस्कृति’
काठमाडौँ । संस्कृतिविद् तेजबहादुर कार्कीको ऐतिहासिक एवम् सांस्कृतिक अध्ययन सम्बन्धी पुस्तक ‘मष्टो संस्कृति’को सार्वजनिक गरिएको छ । भृकुटी मण्डपमा सञ्चालित २२औँ नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनीमा शुक्रबार एक कार्यक्रमबिच
काठमाडौँ । कथाकार धु्रव सापकोटाको कथासङ्ग्रह ‘विचारको लास’को भृकुटी मण्डपमा सञ्चालित २२औँ नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनीमा एक कार्यक्रमबिच लोकार्पण गरिएको छ । साहित्यकार नगेन्द्रराज शर्माद्वारा विमोचित उक्त कार्यक्रममा
अमरवाणी संवाददाता/काठमाडौँ । सिकाइलाई रगमञ्चसँग जोड्ने मुख्य उद्देश्यकासाथ दोस्रो काठमाडौँ अक्षर अन्तर्राष्ट्रिय थियटर फेस्टिबल सुरु भएको छ । राजधानीको काँडाघारीस्थित अक्षरा स्कुलले आयोजना गरेको महोत्वसको प्रा.डा. अभि सुवेदीले
सबु सुवेदीको उपन्यास
काठमाडौँ । कथाकार तथा आख्यानकार सबु सुवेदीद्वारा लिखित उपन्यास ‘मञ्जूषा’ शनिबार राजधानीमा एक कार्यक्रमकाबिच लोकार्पण गरिएको छ । वरिष्ठ कवि तथा आख्यानकार भुवनहरि सिग्देल, आख्यानकार अमर न्यौपाने, पत्रकार फूलमान वन, समीक्षक